Ndinoda visa ye Dubai here? matanho ekuwana basa! 🥇
Hotel Jobs muSri Lanka - Mutungamiri weBasa
Ndiri kuda vhiza yekuDubai ?. Uyu ndiwo mubvunzo waunofanira kupindura. Kufamba ku Dubai pamwe nesu tsanangudzo yakazara yevatorwa. Uye nemakore ekuziva mumakambani ekutsvaga. Iye zvino waisa tsanangudzo yakajeka yekuti ungawana sei basa mu Dubai. Kune vakawanda kwazvo Vanotsvaga basa reInternet. Vese vari kutsvaga kuwana basa kuDubai. Nenongedzo yedu yakadzama, uchawedzera mukana wako. Pane zvakawanda zvidiki zvakawanda zvinhu zvaunofanira kutevedzera. Kazhinji, kutsvaga basa muMiddle East zvichaita basa rako uye nguva. Tete redu rakagadzirira iwe rinonyatsotsanangurwa.
Tichifunga izvi, timu yedu iri kubatsira vatsva vatorwa kuti vazive UAE. Kazhinji kutaura, iwe uchada kubva Z kuZ Z paunenge uchitamira ku Dubai. Nenzira dzose, kana iwe uchida kuva mutorwa kuMiddle East. Iwe zvechokwadi uchada kutevera isu 10 gwaro rekutsvaga kutsvaga nekufamba ku Dubai. Titi yedu nguva dzose kupa ruoko kune vanotsvaka basa mu Dubai, Abu Dhabi, uye Sharjah.
Kune akawanda zvimedu zvechinyakare zvemashoko online. Kunyanya pamablogi ekare maitiro kutamira kuDubai kubasa. Boka redu revanyanzvi rinotarisira kumberi kukubatsira nebasa rako rekutsvaga. Dubai City Company yakakwanisa kuwana ruzivo nezve kutsvaga basa muDubai. Chero paine maitiro ekutora vhiza kubva kuAE Government. Uyezve kuhukura ndege uye sei kuwana furati yekugara muUnited Arab Emirates. Iri gwaro rakatsanangurwa rinonyanya kune vanhu vanogara kunze kwenyika uye vachitsvaka basa muUAE.
Nhanho Nha. 1 Kuziva Dubai inotungamirira
Dubai imwe yenzvimbo dziri pasi pano. Kunyanya kune vanotsvaga basa. Iwe unofanirwa kuziva kuti Guta reDubai rinowanikwa kupi. Chii chinonyanya kufararira kuMiddle East ?. Zviri hotel industry kana Mafuta neGasi, isu tese mamiriro eguta. Kune rumwe rutivi, iwe unofanirwa kuziva iyo Dubai Guta. Inonyatsoziva nezve inoshamisa tsika tsika. Uyezve, vanhu vepakati Middle East vanhu kugamuchira mushanyi wese kuAFA. Uye zvechokwadi, Vanotsvaka basa reMuslim kubva kuPakistan. MuDha Dubai kuipa kune nzira yekutsika yevatenzi vatsva. Chimwe chinhu chaunoda kuziva ndeyekuti UAE iri kumusoro.
Dubai is Islam chitendero uye zvose itsva expat vanofanirwa kutora izvi mumakore-ese kutenderera zuva mararamiro. Dzvanya pamufananidzo uri pazasi. Uye tsvaga zvaunoda kuziva nezve Dubai. Ndinoda visa ye Dubai here?. Izvo zvose zvinotenderera kuti unobva kupi. Vakawanda vevanhu vanobva kuEurope neCanada vanogona kuwana visa. Zvakaoma zvikuru iri kune vaIndia vanoenda kunyika.
Nhanho Nha. 2 UAE uye zveruzhinji
Zvakaenzana zvakakosha kuti uzive Dubai. Ndekuziva kana iwe uchikodzera kupinda muUnited Arab Emirates. Pane rimwe divi, usati wafunga kuronga kuenda kuUAE. Iwe unofanirwa kutarisa pasipoti yako uye zvido zve visa. Pnguva imwechete, iyo ichave yekuchenjera kufamba. Iva anopfuura zana muzana chokwadi icho unogona kufamba zvakanaka.
Ndiri kuda vhiza here Dubai neEmirates?. Ehe, iwe unofanirwa kuve vhiza yakagadzirirwa muruoko rwako kana iwe ukagara muAFA. Uyezve, iwe unofanirwa kushanda uye utarise kuUaE visa ruzivo. Iyi ndege yeEmirates yakaisa mashoko ose kwauri. Saka iwe unofanira kuiverenga zvakanyatsonaka, uye uone kuti chii chaunoda maererano nekufamba.
Yakawanda yenyika inodikanwa kuva ne visa inoshanda kana zvichidikanwa. Uye kuva nepasipoti inoshanda kwemwedzi mitanhatu. Kune rimwe divi, kune zvakare vanobatirira pasipoti dzisina-standard senge dzezvematongerwo enyika. Nechikonzero ichi mune ino nhanho nguva dzose iva nechokwadi chokuti une basa rakanaka rekushanda. Ndapota chengetai kuti zvipi zvinyorwa zvekufambisa zvingada kuendesa ku Dubai Sezvakataurwa zvichinzi Emirates zvakare vane zvinyorwa zvakasiyana siyana zvinodiwa nevatsvaki vemabasa. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, mune danho iri ndapota chengetedzai zvakare famba-mubvunzurudzo mu Dubai. Izvo zvaunoda kukumbira vhiza kuti uve wakakodzera kupinda UAE. Zvakare, verenga mamwe mapasipoti zvinodiwa zveAU.
Nhanho Nhamba .3 Tarisa mhando dze visa
In nhanho No.3 yatinoda kuti uwane mhando yevhiza yatinogona kuve nayo. Semuenzaniso, tinogona kuva - Nguva refu-yekupinda kamwe-vhiza yekupinda-mushanyi wemazuva 90. Uye pakushanda visa ku Dubai. Uyezve mazuva e30 uye mazuva e14 nekuda kwezororo reazororo rakapusa. Kupiwa aya mapoinzi, shanyira hurumende.ea official portal. Iva nekutarisa kuti vhiza ipi yaunogona kuwana uye nezvese zviri chii. Bhuti, iwe unogona kuva nenzira pfupi yenguva yeku vhiza.
Ndeapi pater yandinofanira kunge ndinayo, kana Ndinoda vhiza reDubai? ndisati ndaenda ?. Yese iyo mibvunzo iwe unogona kuwana neHurumende.ae webhusaiti. Iwe une sarudzo dzinoverengeka, uye iwe unofanirwa kuve nechidimbu cheruzivo rwakadzama. Kunyanya iyo yakanyanya kunaka kubva kune yakanaka yakavimbika masosi. Uye hapana chakavimbika kupfuura UAE Hurumende. Iwe unogona zvakare tsvaga humwe humwe hune hukama hune chokuita nebasa rako rokutsvaga mu Dubai ne Abu Dhabi. Nokuda kwewebsite yeHurumende.ae kubatsira vatenzi vatsva vane MBA kuti varambe vachishanda muUAE.
Iyo yakareba Nguva Yevatambi Visa - zvikuru inokurudzirwa kune vatorwa vatsva !.
30-day tourist visa, iyo inogona kuwedzerwa kune mazuva 40 - isina kukurudzirwa kune vanotsvaka basa.
14-zuva rebasa vhiza, kungoitirwa mazororo kwete kwevakadzingwa.
30-zuva Shanyira visa, iyo inogona kuderedzwa kwemazuva 30.
Nhanho No.4 Iye zvino unogona kuverenga visa usati wapfuurira ku Dubai
Zvakanaka, isu tava kuziva kana uchikwanisa kupinda Dubai. Iwe unoziva zviri zvese nezve vhiza kunyangwe for woman expat. Nhanho inotevera yatinofanira kutevera. Bhuka vhiza yekupinda muUnited Arab Emirates. Kambani yedu vakaita research refu pane izvozvo. Uye iyo iri nyore kurongedza system ndeye Etihad UAE visa system. Padivi rakanaka, kana uchibva kune dzimwe nyika kubva kuAUE Rondedzero yehurumende. Kazhinji, haudi vhiza usati wapinda UAE. Semuenzaniso, kana iwe ukamira pa Abu Dhabi International Airport. Mune maminetsi mashoma, vashandi vepo airport vachadaro enderera mberi neImigration process yako. Uye munguva diki iwe uchagamuchira vhiza pakusvika.
Pari kuronga kubhururuka Etihad Ini ndinoda a vhiza yekuDubai?. Sezvo iwe uchingoronga kubhururuka haufanire kuva ne visa. Paunoverenga ndege, saka unoida. Asi pane yakanaka lehlakoreng, unogona kuzviita online. Izvo hazvisi dambudziko kunyange kutanga kutanga kuchengeteka mabasa muUAE.
Asi zvakare tarisa pane dzimwe mawebsite. Iva wakachenjera uye uenzanise nemitengo.
Kuenda ku Dubai Etihad UAE visa book booking
AirArabia zvinyorwa uye visa
Emirates mazai mazai musati mhanya ku Dubai
FlyDubai kuenda ku Dubai uye visa rubatsiro rweUAE
Nhanho No.5 Tsvaga nzvimbo yekugara muDhaibha
Usati waenda kuDubai. Unofanira kutsvaga uye titarise dzimba dzinoshandirwa muDubai. Neichi chikonzero, iwe unofanirwa kutsvaga chipenga chakachipa. Uyezve, kamuri yakafara haisi iyo mhando iwe uchavepo kuti utore. Ehezve, iwe unofanirwa kufamba usina kutora Mhuri yako. Mukufamba kwenguva, ivo vanogadzira chete mari inoshandiswa. Pakutanga chaipo, iwe unofanirwa kuchengetedza mari paunotamira kuDubai. Kunyanya kubva kunyika dzakadai seMalaysia kana India. Shandisa zvishoma iwe zvaunogona kuitira pfuti kana nzvimbo. Iwe unofanirwa kutsvaga nenzira inofanirwa kugovera pokugara. Iwe unogona kudana vatenzi vakapedzisira kana kutumira ne email. Iva nechokwadi chokuti uchava nezvinhu zvose. Pamberi iwe uchaenda kuUAE. Uyewo, mazano akanaka ndeyekutsvaga imba muBud Dhabi uye Shariah. Kune dzakawanda dzimba dzinodhura dzinodhura.
Ndinoda visa ye Dubai here? Hungu, iwe uchahuda, uye pane chidimbu. Kuti uwedzere kushanda visa. Iwe unogona zvinoshandiswa kuHurumende mabasa muUAE. Nekuti nenzira iyi iwe unowedzera nekuwana pekugara pakanaka. Chete nekuti makambani anozoisa mari zhinji zhinji kukuhaya. Uye uine izvi mupfungwa, mikana yekuwana pekugara nyowani ichaita dhizaini chaiyo.
Nhanho Nhamba .6 Kufamba kuDhailand neBhuku rekutsvaga kuenda ku Dubai
Tese tinoziva kuti ndege hadzina kudhura kune vatsvaki vatsva. Saka edza kuchengeta zvaunoshandisa zvakaderera sezvaunokwanisa. Tsvaga mutengo wekudzokera ndege kuDubai. Kune rimwe divi, Dubai ichiri nzvimbo huru kune Middle East mabasa mabasa. Asi unogona kutsvaga nendege zvakare kuna Abu Dhabi. Kuenda kuDubai kunogara kuchidhura. Kunyangwe akareba sei unenge uchitsvaga mabhisiki ezano. Padivi rakashata, iwe uchafanirwa kuchengetedza imwe mari. Nekuti paunogara muAFA. Iwe uchafanirwa kuve nazvo munzvimbo. Kugara muUnited Arab Emirates. Haisi mutengo unodhura kutora.
Ndinoda vhiza ku Dubai here?
Nhanho Nha. 7 Iko kwasvika iye zvino famba yakagadzirira!
Kubvira pawakasvika paDaily Airport. Iwe unoda kuwana foni yako yakagadzirira kuenda kunotsvaka basa. Nokuda kwechikonzero ichi, tinokutungamirirai zvishomanana. MuUnited Emirates ndivo vari vaviri mafambisi makuru ehurumende. Zvinowanikwa kune vose vanoenda kune dzimwe nyika. Etisalat uye du, zvose zviri zviviri zvakanaka kwauri iwe semutorwa mutsva paunenge uchitamira ku Dubai. Zvose zvinoenderana nezvamunoda kutarisira kuwana mushando wekufambisa kushandiswa.
Iko hakuna mutsauko wakawanda maererano neye mobile mu UAE. Musiyano mukuru pakati pevashandi vaviri ndewekuti du mobile provider. Kubhadharisa vashandisi neyechipiri chete. Uye kune rumwe rutivi, Etisalat inobhadharisa paminiti vashandisi vese. Asi haufanirwe kunetseka. Ose ma mobile mashandiro anotongwa anodzora uye chengetedza vashandisi. Rimwe zano nderekuti ivo vari kushanda kwete muAAE chete. Kune zvakare yakawanda Vashandi veIndia muKubititi uyo ari kushandisa iko iko ikozvino.
Kuva nefoni Ini ndinoda visa ye Dubai ?. Hungu ... pano iwe une vashambadziri ve 2.
Etisalat nhare dzefoni mu Dubai
Dufoni yefoni ku Dubai
Nhanho Nhamba .8 Kugadzirira Reve yako uye tsamba yeChivha yeA Dubai
Maharaging maneja muDubai kutsvaga CV yega yega. Asi parutivi rwakashata rwakakomberedza 2-5 wechipiri pane imwe neimwe Resume. Saka iwe unofanirwa kuve neinoshamisa uye isina mavara inotangazve kuwedzera hunyanzvi hwako ruzivo. Nemashoko mashoma, CV Yako haifanire kunge iri 2-3 mapeji. Mune yako yakakwana kutenderera inofanira kusanganisira chete ruzivo rwehunyanzvi. Izvo zvakakosha rambazve kunyora rakatumirwa neForbes.com Pane hurukuro huru yakapoteredza vanotsvaka basa mu 2018 uye 2019. Chii chinofanira kuitika mukugadzirisa zvakare kunyora uye izvo zvisingafaniri kuitika munyaya ino.
Asi pane zvimwe zvisiri muCV kunyora. Somuenzaniso, kana iwe uri kutsvaga nzvimbo yepamusoro-kati muDhaibha. Iko kune yakasarudzika nzira yega yega basa rekuvhima. Kwemazhinji chikamu, kana mamiriro acho nekuti basa rinodiwa. Iwe unofanirwa kuwedzera yako zvekare kune 3 mapeji. Nguva nenguva mune dzimwe nyika dzepasi. Kuve nenzira yavo yekusika inotangazve. Mamwe eCV anowanzo taura akapfupika. Iwe unofanirwawo kutarisa Forbes muMiddle East inotanga zvakare mutungamiri wevanotsvaka basa.
Kune rumwe rutivi, unogona kukora vashandi vezvenyanzvi nokuda kweCV kunyora. Semuyenzaniso Peopleperhour CV vanyori. Iwe unogona kukweretesa nepamusoro pe $ 30 nokuda kwekanakisisa munyori weCV. Asi kana iri nzira yakanyanya kukuitira iwe. Unogona uwane CV itsva zvishoma ne $ 5 pa Fiverr.com. Pane nzira dzakawanda dzekushandisa chaiyo CV yako. Asi iwe unogona kuzvinyora iwe pachako. Pazasi iwe une Independent.co.uk yakazara gwara nzira yekuzviita nenzira kwayo.
Nhanho Nhamba .9 Kuumba mapeji evanhu
Usati waenda ku danho rinotevera uye tanga kutamira kuDubai. Iwe unofanirwa kugadzira nyanzvi dzemagariro profiles. Kambani yedu yakagadzira rondedzero yakazara. Sezvinei sekutsanangurwa kwakadzama kune yega yega yekunyora portal. Zvakare, isu takaisa Dubai yepamusoro-yakatemerwa social media makambani. Kwaunofanira kutanga kugadzira yako mbiri. Iko hakuna mashiripiti kiyi mubasa rako kutsvaka vatorwa. Nechitemwa ichi, unoda kuita tsanangudzo yakajeka pawebsite yega yega. Saka ita zvakanaka uye enda kune yekupedzisira yekupedzisira nzira mukutsvaga basa rako. Ndinoda visa ye Dubai here? kunyange pa Linkedin ?.
Zvakanaka, imomo unogona kuwana makambani mazhinji. Semuyenzaniso, Emirates Group iri kukwereta pa Linkedin. Pane rimwe divi, motokari makambani anotarisira expats. Pane angangoita mikana isingaperi yemunhu chero upi zvake. Saka, kambani yedu inopa vanotsvaga basa kuti vave neiyo mbiri yakasimba. Nekuti chokwadi, unogona kuzvibvunza kuti ndinoda vhiza kuenda kuDubai ?. Uye ipapo mukana unouya. Uye iwe ungangosiiwa usina kana chinhu.
Nhanho Nhamba .10 Kushandisa Dubai City Company
Dubai City Company tiripano kukubatsira kuenda kuDubai!. Nezvedu zvinoshamisa recruitment services. Iwe pachako uchaita basa reroto muUAE. Sezvakangoitika, chinangwa chedu ndechekuti kukubatsira iwe kuiswa Dubai. Yedu yekupedzisira chinangwa ndechekubata basa kukutsvaga iwe. Asi isu tine tariro iyoyo iwe uchashandisa basa redu. Uye iwe uchafarira kambani yedu. Iwo masevhisi atiri kupa anobatsira chaizvo. Muchokwadi, vese vasina mahara.
Yedu inozivikanwa zvikuru kambani muDhaibha kune vashandi vemarudzi ose. Kubatsira atove anopfuura makumi mashanu ezviuru zve vatorwa vatsva kuti vashande. Kupa mazano emahara nemhinduro. Semuenzaniso, ini ndinoda vhiza kuenda kuDubai, kana kuti ndawana sei basa kuDubai uye nzvimbo yakakodzera yemabasa?. Zvose zvatinokwanisa kutarisira iwe.
Linkedin anayo nharaunda yakakura yekuunganidza. Mukati meiyo social media network, unogona kubatana nevashandi vekwake nenzira isina kunanga. Kune rumwe rutivi kubva Maonero eArabic career maonero. Iyo ndiyo nzira yakanakisisa yekuwana basa. Kushandisa basa redu zvakanaka kukubatsira iwe kubatana nevatariri vemari. Nemasevhisi edu, unogona kubatana neanopfuura 5,000 ekutora vatungamiriri muDubai City. Iwe unofanirwa kunyatso kubatana pamwe nenyika yemagariro vatori venhau. Kutsvaga basa idzva mushoko remakambani anoshanda. Iyi inzira yakangwara.
Ne LinkedIn yedu, iwe unogona kusimbisa basa rako. Tora kaviri mikana kuwana mikana yakakodzera yemabasa muEmirates. Pano pakarepo chero nguva iwe uchishingaira kutsvaga mutsva basa kana mukana webasa kana kungochengeta basa rako rakazaruka mukati meUAE.
Unogona zvirokwazvo kutsvaga basa. Kushamiswa muMiddle East. Joinha maWhatsApp ema WhatsApp kumberi. Wedzera nhare mbozha yako kune hiring maneja. Batanidza nevamwe vanotsvaga basa, vatorwa, uye vatungamiriri vehunyanzvi. Kazhinji kutaura vanokurudzirwa zvikuru. To kuwana basa muUnited Emirates.
Kambani yedu yakagadzira akati wandei mapoka e vanotsvaka basa. Kusvikira panguva yazvino WhatsApp mashoma mapoka. Asi isu tiri kuva netariro kuti muchakwanisa kutumira chikumbiro chenyu kune vanyaradzi. Uyezve, timu yedu yekuraira ichave zvinopfuura kufara kukubatsira kuwana basa muSaudi Arabia. Kana iwe ukagamuchira basa rekupa pane rimwe remapoka edu. Saka, panguva ino, isu takamirira yako nyanzvi ruzivo. Mukufunga kwako ruzivo rwevatengi ndapota usatumira mhinduro dze spam.
Tumira Resume ku Mahofisi Ekuchengetedza ku Dubai
Dubai City Company, kwechinhu chimwe chete, yaisa panzvimbo yekuchera vese makambani muDubai. Iwe unogona ikozvino kutumira yako CV. To top rated recruitment companies in Dubai. Iwe unogonawo kutarisa kwavari. Kuti ikubatsire iwe, kushandiswa kunyange nekukurumidza. Takaisa nhamba uye nhamba dzefoni. Pamusoro pezvakanaka kana iwe uri kushandisa urongwa urwu rwevatariri vekushandira zvakanaka. Zvechokwadi, vanokubatsira kuti uwane hope dzebasa muUnited Emirates. Pasina kunonoka, unofanirwa kugadzirisa vashandisi uye kugovera vatungamiri. Kuti iwe uri kuzarurirwa mikana mutsva mubasa mu Dubai.
Matanho ekuwana basa seyanyanzvi?
Ndiri kuda vhiza reDubai? matanho ekuti uwane basa se nyanzvi?. Ndinovimba wave ikozvino tsanangudzo yakazara yekushanda mu Dubai. Ndiri kuda vhiza reDubai? kubva paAZ Matanho kusvika pakuwana basa seAxpatriate. Tsvaga kuti zvaunoda chaizvo kuva ne visa, ndege, uye pekugara yeAFA. Tarisira zvese izvo zvidimbu zveruzivo ipa iwe ruzivo rwakakwana. Nekuti isu tine zvakawanda zvakawanda zvekupa. Usakanganwe izvozvo iwe unogona kuwana basa mumakambani ebhengi uye emari. Uye ivo vari kupa mvumo yekushanda visa muUAE.
Dubai City Kambani ikozvino ichipa yakanaka call centre Mabasa muDubai. Dare redu rakasarudza kuwedzera ruzivo rwemutauro mumwe nomumwe wedu Dubai expats. Saka, uine izvi mupfungwa, ikozvino unogona kuwana vatungamiriri, matipi uye basa muUnited Arab Emirates nemutauro wako.